Request Free Sample (Similac Mum) – Similac
Similac Mum နမူနာပစ္စည်းရယူရန် ဖောင်ဖြည့်စွက်ပါ
မေမေ့ဆီမှာ ကိုယ်၀န်ရှိနေတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်နော်။ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များအတွက် အလွန်အကျွံ၀ိတ်တက်ခြင်း^မဖြစ်စေဘဲ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရများကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ သိပ္ပံနည်းကျဖော်စပ်ထားတဲ့ Similac Mum ကို‌ရွေးချယ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
Similac Mum တွင် သဘာဗီတာမင်အီး၊ ဒီအိတ်(ချ်)အေ၊ လူတင်း၊ခိုလင်း၊ ‌ဖောလစ်အက်ဆစ်၊ ကယ်(လ်)ဆီယမ်နှင့် သံဓာတ် စသော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်၂၇မျိုး ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ တစ်နေ့ ၂ခွက် သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များအတွက် နေ့စဥ်လိုအပ်သော ဖောလစ်အက်ဆစ်နှင့် ကယ်(လ်) ဆီ ယမ်များကို ရရှိစေသည်။#
# US DRI Recommendation
^Huynh DTT et al. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 May 7: 1-9.
Fulfillment of all samples is at the discretion of Abbott.
We can arrange delivery to Yangon and Mandalay (selected townships) in these days.